डा. केसीसँगको वार्ता सकरात्मक, साँझ पनि छलफल हुने - NewsCenterNepal.com
डा. केसीसँगको वार्ता सकरात्मक, साँझ पनि छलफल हुने
काठमाडौं -अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीका मागका सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोली र केसीका प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक देखिएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष लोचन कार्कीले जानकारी दिनु भयो । डा केसीले राखेको मागको बुदाँगत रुपमा छलफल भएको र साँझ दुवै पक्षले मस्यौदा तयार गरेपछि बैठक पुन बस्ने उहाँले बताउनु भयो ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा ६ बुँदे माग प्रस्तुत गर्नु भएको छ । डा केसीले राखेको मागका बिषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको र सहमति खोज्ने प्रयासका साथ साँझ पुन वार्तामा बस्ने अध्यक्ष कार्कीले बताउनु भयो ।
डा। केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले बुधबार शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सरकारी टोलीमा सहसचिव जीवराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा। दिलीप शर्मा सहभागी हुनु भएको छ ।
सरकारले टोली गठन गरेलगत्तै डा। केसीका तर्फबाट डा। जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ताटोली गठन गरिएको थियो । उक्त टोलीमा डा अञ्जनीकुमार झा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा। कार्की हुनुहुन्छ ।चिकित्सा शिक्षा सेवा सुधारका लागि भन्दै डा। केसीले भदौ २९ गते जुम्लाबाट अनशन शुरु गनुृ भएको हो । १९औं पटक अनसन बसेको आज २५औं दिन हो ।
भूमिका सुब्बाको ‘बनचरी’ सार्वजनिक(भिडियो सहित)
कपिलवस्तुको विजयनगरमा अदालती प्रक्रिया मिचेर सम्बन्ध विच्छेद